Habka ay degmadaadu u shaqayso | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Barashada bulshada / Buuga "Om Sverige" / Daganaanshaha dalka Iswiidahn / Habka ay degmadaadu u shaqayso
Guddiga wuxuu ka kooban yahay siyaasiyiin badanaaba shaqeeya waqtigooda firaaqada. Taas micneheedu waa in xubinta guddiga ka shaqeeyaan iyagoo ku dhinac wada shaqo kale ama waxbarasho. Guddiyadu waxay helaan lacago kala duwan. Lacagta ay helayaana waxay ku xiran tahay hadba miisaaniyadda eey degmadu go'aamiso. Guddi waliba wuxuu leeyahay xafiis maamuleed. Waxaa halkaa ka shaqeeya shaqaale-dowladeed oo ka shaqeeyo qorsheeynta iyo hirgeliya go'aamada guddiga.
Haddii aad waxbarato, shaqayso ama shaqo raadineyso, waxaad xaq u leedahay in aad cunugaaga geyso dugsiga barbaarinta ee xaafaddaada Dugsiga barbaarinta caruurta waxaa loogu tala galay caruurta uu da'doodu tahay hal ilaa shan sano.
Dhamaan caruurta joogo Iswiidhan, marka ee gaaran 6 sano, waxeey xaq uu lee yihiin in ee dhigteen fasalka-dugsiga barbaarinta. Masawirqaade: Colourbox
Degmooyinka dhamaantood waxaa ku yaal dugsiga hoosedhexe oo loogu talagalay carruurta da'doodu u dhexeyso lix ilaa 16 sano. Waxaa kaloo halkaa ka jiri kara dugsiyo madaxbannaan iyo kuwo gaar loo leeyahay. Haddii la dhigta dugsi gaar loo leeyahay waxaa la bixiyaa khidmad. Dugsiyada dowladaa iyo kuwa madaxabannaan, waxaa lagu maalgeliyaa canshuurta. Sanadka u canugu buuxsado lix sano ayuu bilaabi kara fasalka-dugsiga barbaarinta. Waad dooran kartaa haddii aad dooneysid in canuugaadu bilaabo fasalkadugsiga barbaarinta. Carruurta dalka Iswiidan badankood waa ay dhigtaan. Sanadka u canugu buuxsado todobo sano waa khasab in iskuul dhigto. Taasi waxaa lagu magacaabaa waajibka iskuul dhigashada. Dugsiyada dowladda iyo kuwa madaxabannaanba waa lacag la'aan. Dugsiyada ku yaal xaafaddaada waxaad ka heleysaa shabakadda maamulka degmada.
Daryeelka waayeelka Sawir: Susanne Kronholm, Johnér
Sida meelo badan oo adunka ka mid ah, waalidka Iswiidhan ayey saaran tahay mas'uuliyadda xanaanada iyo daryeelida carruurtooda iyo dhallinyaradooda. Laakin haddii ee taasi si fiican uu shaqeeyn, mas'uuliyada badankeeda waxeey markaas saaran tahay degmada. Xafiiska adeega bulshada waxuu u caawiyaa caruurta iyo reeraha habab kala duwan uu dhibaateeysan. Waxeey noqon karaan reero aan heeysan lacag ku filan. Waxeey ahaan karaan dad aan heeysan meel ee degaan. Ama dad qabo dhibaato la xariirto maandooriyo iyo khamaro. Ama dad khatar ugu jiro in la jirdilo oo la kufsado. Caawimaadda uu dhiibaayo xafiiska adeega bulshada waxeey ka koobnaan kartaa wada-hadal, wax barasho waalidka la siiyo, qof xiriiriye ah oo loo qabto dhalinyarada ama reerka oo dhan. Qof xaririye ah waa sidii saaxiib ama qaraabo dheeraad ah oo lala hadlo ama wax farxad gelin leh lala sameeyo. Haddii xafiiska adeega bulshada soo gaarto dacwo ku saabsan in canug si xun guriga loogula dhaqmo. Waxaa xafiiska adeega bulshada waajib uga saaran yahay in uu baaritaan ku saameeyo xaalada uu canuga ku suganyahay.
Degmooyinka badankood waxa ku yaalo xafiiska macaamiisha. Waxaad halkaas tusaale ahaan ka heli kartaa caawinaad haddii aad soo iibsatay shey ee wax ka qaldan yihiin oo aadna ku qanacsaneeyn. Xafiiska macaamiisha waxaad ku ogaaneysaa xuquuqdaada aad lee dahay iyo waajibaadka ku saaran iyo waxa aad sameeyneeysid si aad uu celiso badeecada ee wax ka qaladan yihiin.
Warbixin dheeraad ah ka akhriso bogga internetka www.hallakonsument.se ama wac 0771-525 525.
Waxaad xaq uu lee dahay turjumaan. Masawirqaade: Colourbox